पसल र गाडीहरुमा कागती र खुर्सानीको माला किन झुण्ड्याइन्छ ? – live 60media
पसल र गाडीहरुमा कागती र खुर्सानीको माला किन झुण्ड्याइन्छ ?
काठमाडौ । पसल र सवारी साधनहरुमा कागती र खुर्सानीको माला झुण्ड्याएको तपाईले पक्कै देख्नुभएको छ होला । तर तपाईलाई थाहा छ ? यस्तो किन गरिन्छ ? यसो गर्नुको पछाडि कसैको खराब नजर नलागोस् भनि गरिएको भनिने गरीन्छ । तर वास्तविकता त्यो भन्दा अलि फरक छ ।
सवारी साधनमा राख्नेहरुले भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटना टार्न यस्तो गरिएको तर्क दिन्छन् । एक प्रकारले यसलाई अन्धविश्वास मान्नेहरु पनि छन् तर पनि पसल तथा सवारीमा कागती र खुर्सानीको माला राखिएकै हुन्छ । आखिर यसरी कागती र खुर्सानीको मालाले के असर गर्छ त ? यसबारे केही जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यवसाय वा मेसिनरी सामाग्रीको प्रयोगमा जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कागती र खुर्सानीको माला लगाउनुमा वास्तु दोष हटाउन सकिने मान्यता रहँदै आएको छ । हुन त घर तथा पसलको आसपासमा कागतीको रुख भएमा वातावरण स्वच्छ हुने र त्यसले मानसिक विचार तथा सोचमा सकारात्मक असर गर्दछ ।
तर घर तथा पसल आसपासमा विविध कारणले कागतीको विरुवा लगाउन सबैलाई सहज हुँदैन । त्यसैले कागतीको एक दाना प्रयोग गरेर वास्तुदोष हटाउने गरिन्छ ।
तर उक्त कागती एक साता भित्र परीवर्तन गर्नुपर्दछ । त्यसले कागती कुहिन नपाओस् । हावा सफा बनाउन कागतीको अमिलो राम्रो विकल्प मानिन्छ । खुर्सानीको रागले समेत प्राकृतिक रूपमा वायुलाई स्वच्छ बनाउँछ ।
← यस्ताे एउटा देश जहाँ, सर्पकाे कुनै जात पनि पाइदैन, कारण सुन्दा झनाै अनाैठाे !
नपढ्ने लाइ ठु’लो द’शा लाग्नेअबस्य प’ढेर नाग देवताको दर्शन गरौ →